Hiriira nagahaa namoota hedduun lakkaahaman magaala Sioux City downtown sababa namni baaye Ethiopia | KWIT
Akka gabaassatti hiriira mormii irratti kara nama 50 oltu ajjeefame. Bulchittooni Ethiopia interneeta cufaniiru umanni akka oduu hin arganeefis mideallee cufadhiiru, akkasumaaf ummata kaan hedhatti guraanni jiruu.
Manni fayyaa Sioux land sababa COVID-19 namni tokko dabalataan du’uu himan, namni kunis nama umriin 61-80 jiruudha, waliigalatti magaala Woodbury County keessati namni du’e 44 gaheera, namni qabame waliigalatti nama 3,172 ta’uu himame.
Manni fayyaa Iowa akka gabaasetti se’aati 24 keessati namni haarawa du’e 5 yoo ta’u kan haarawa qabames 300 dha. waliigalatti namni state keessati due 717 yoo ta’u kan waliigalatti qabame ammo 29,400 dha.
Qorattoni daldala akka duabbatanitti akka qorannoon mulisutti magaala Midwest fi Plains erga hojii banamuu jalqabe akka ikkonomiin fooya’aa dhufaa jiru himan.
Akka waliigala biyyaati kara 50.3 utaale jira June keessa, akka May 43.5 irraa jalqabe. galmeen kunis hanga 50 oljiruu ol guddateera. Kan 50 gad jijiru gaddi xiqqaatu muldhisaa.
Community mana barumsaa magaala Sioux City barumsa muraasa ganna keessa banuuf karoorfataniiru.
Barattooni kanneena akka jalqaba, baratottaa kutaa 1st faa , 2nd faa fi 8th faa tti. Kunnis August 3rd hang 14th guyyati se’aati lama barumsa barachuu kan jalqaban ta’a. dabalataan, barattooni gugurdoon kan akka math fi aljebraa kan fudhatan ta’a.
Itti gaafatamaan Aanaa baruumsa akka jedhetti barattoni golaa fi barumsi academic fulduraattif oduu gaha fi hojiiwwaan jallaa dabree.
Manni barumsa naanno akka jedhetti “barumsatti deebi’un” barumsi qaamaafi online aamille nijalqaba garuu akka dhukkubni kun itti baduun laalama.